Mayelana noWanyu | I-Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd.
Ithebula Lokusebenza Lomshini
Ithebula Lokusebenza Logesi
Uhlobo lweMoto kagesi
Uhlobo lukagesi lweHydraulic
Ithebula Lokusebenza Kwezabesifazane
Ithebula le-Ophthalmic Operating Table
I-Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd.
Khetha into eyodwa impilo yakho yonke.
Gxila ekwenzeni imikhiqizo ibe ivelu eyinhloko.
Uthando lokwenza imikhiqizo ibe nomphefumulo.
I-Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd. igxile kakhulu ekuthengisweni kwemishini yezokwelapha, igxile ekukhangiseni kwemishini yegumbi lokuhlinzela, okuhlanganisa izibani zokusebenza, amatafula okusebenza, namapende okwelapha. Wonke umugqa wemikhiqizo uthengiswa emhlabeni wonke, futhi sinabalingani be-ejensi abakhethekile emazweni amaningi eYurophu naseMelika.
NgoJuni 2003, inkampani yatshala imali ekusungulweni kwefekthri egxile ekuthuthukisweni nasekukhiqizeni imishini yezokwelapha yamagumbi okuhlinzela. Ngemva kokusungulwa kwefekthri, inani elikhulu lamathalente esayensi nezobuchwepheshe kanye nabasebenzi abaqeqeshwe kahle baye bathathwa futhi baqoqwa ukuze kusungulwe futhi kuthuthukiswe ukuphathwa kwezinkampani. Njengamanje, yonke imikhiqizo yethu isidlulile isitifiketi se-CE ne-ISO.
Njengamanje, inkampani yethu ithuthukise amatafula wokusebenza anemisebenzi eminingi, uchungechunge oluningi lwezibani zokusebenza ezingenathunzi, izilenge zezokwelapha, amabhuloho okumiswa e-ICU neminye imikhiqizo yemishini yezokwelapha. Le mikhiqizo isendaweni ehamba phambili e-China futhi ingangeniswa ukuze ihlangabezane nezidingo ezahlukene zezibhedlela ezahlukene. Ithengiswa emhlabeni wonke futhi inconywa kakhulu ngabasebenzisi.
Asigcini nje ngokuba nonjiniyela be-R&D abangaphezu kweshumi ababhekele i-R&D eqhubekayo kanye nokusungulwa kwemikhiqizo ehlukahlukene, kodwa futhi sigcina ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside namanyuvesi amaningi.
Isixazululo siphumelele ekutholeni isitifiketi samakhono kuzwelonke futhi samukelwe kahle embonini yethu ebalulekile. Ithimba lethu lonjiniyela abangochwepheshe ngokuvamile lizolungela ukukusiza ngokubonisana kanye nempendulo.
Ikheli: Igumbi 1401, Shangcheng International Building, No.505, Caoyang Road, Shanghai